Lahatsoratra momba ny visa
Ahoana ny fomba hahazoana visa any Ghana?
Enga anie 12, 2022 Demi Ghana, visa
Mba hahazoana visa ho an'i Ghana ho an'ny fizahan-tany na ho an'ny raharaham-barotra, te-hitsidika ny tranokalan'ny masoivohon'i Ghana akaiky anao ianao. Tsy afaka manao ny zava-drehetra amin'ny Internet ianao amin'izao fotoana izao. Any amin'ny ankamaroan'ny consulat ao Ghana, azonao atao
Ahoana ny fomba hahazoana visa fizahan-tany ho an'i Thailand?
Enga anie 4, 2022 Demi Thailand, visa
Azonao atao ny mangataka visa fizahan-tany amin'ny tranokala ofisialy Thai e-visa. Ny olom-pirenena avy amin'ny firenena maro dia afaka mankany Thailand tsy misy visa. Ny ankamaroan'ny firenena any Afrika na any Amerika Afovoany dia mila visa fizahan-tany ho an'i Thailand. Izany hoe
Ahoana ny fomba hahazoana visa any Kenya?
Enga anie 2, 2022 Demi Kenya, visa
Tsidiho ny eVisa avy amin'ny Repoblikan'i Kenya. Ny ankamaroan'ny firenena eran'izao tontolo izao dia mila e-visa mba hahatongavana any Kenya. Ny firenena sasany, indrindra any Afrika Atsinanana sy Atsimo, dia tsy mila visa. Mila e-visa ianao alohan'ny hidirana ao amin'ny Repoblikan'i
Ahoana no hifindra monina any Dubai?
Aprily 20, 2022 Demi Dubai, mifindra, visa
Raha hifindra monina any Dubai ianao dia afaka mahazo asa any UAE ary mahazo visa asa. Raha manana mpianakavy any Dubai ianao dia afaka manohana anao amin'ny visa ho an'ny fianakaviana. Raha mikasa ny hianatra any
Ahoana ny fomba hahazoana visa Kenya ho an'ny Indiana?
Aprily 18, 2022 Shubham Sharma Indiana, Kenya, visa
Kenya dia firenena afrikanina fanta-daza amin'ny zaridainan'ny safariany, saingy manana zavatra betsaka hatolotra ny governemanta, toy ny haran-dranomasina sy ny morontsiraka. Fantatra amin'ny anarana hoe Repoblikan'i Kenya, Kenya dia nomena anarana taorian'ny Tendrombohitra Kenya, tampon'ny tampon'ny Kenya.
Ahoana ny fomba hahazoana visa kanadiana ho an'ny Pakistani?
Aprily 18, 2022 Demi Kanada, visa
Ho an'ny mpizaha tany Pakistan, malaza i Kanada, ary misokatra ho an'ny mpizahatany foana. Noho ny politikan'ny visa sy ny fifindra-monina tsotra dia tia mitsidika na mipetraka any Canada ny Pakistaney. Ary raha mitsidika an'i Canada ianao amin'ny 2020 ary manantena ny hahazo
Ahoana ny fomba hahazoana visa Tiorkia ho an'ny Saodiana? Torolalana fohy
Aprily 18, 2022 Demi Saodiana, vorontsiloza, visa
Afaka mahazo visa Tiorka an-tserasera ao amin'ny e-Visa Republic of Turkey ianao. Ny olom-pirenena Saodiana dia afaka mahazo visa mora foana amin'ny fialan-tsasatra fohy any Torkia, ho an'ny fizahan-tany, na ho an'ny orinasa. Raha mila fanampiana bebe kokoa ianao raha te hangataka Tiorka
Ahoana ny fomba hahazoana visa Turkey avy any Oman? Torolalana fohy
Aprily 18, 2022 Demi Omanis, vorontsiloza, visa
Afaka mahazo visa Tiorka an-tserasera ao amin'ny e-Visa Republic of Turkey ianao. Ny olom-pirenena Omami dia afaka mahazo visa mora foana amin'ny fialan-tsasatra fohy any Torkia, ho an'ny fizahan-tany, na ho an'ny orinasa. Raha mila fanampiana bebe kokoa ianao raha te hangataka Tiorka
Aprily 18, 2022 Shubham Sharma Kanada, visa
Ny Amerikanina, ny Meksikana ary ny olona hafa avy amin'ny firenena maro be fidiram-bola (jereo ny lisitra etsy ambany) dia tsy mila visa hitsidika an'i Kanada; fa tsy maintsy mahazo fahazoan-dàlana elektronika (eTA) azo alaina amin'ny Internet izy ireo. Ny olon-drehetra dia mitaky visa